Izindaba - Ungayikhetha Kanjani Futhi Uyisebenzise I-Automatic Cat Toilet
Yimaphi Amabhokisi Okungcola Okuzihlanza Ahamba Phambili?
Ukuthola ibhokisi lodoti wekati elizenzakalelayo elihle kakhulu kudinga ukuthola ibhalansi phakathi kwezici ozifunayo nokuthi ikati lakho likhululekile. Amanye amakati angavinjelwa noma ancitshiswe yimisindo emikhulu, ngakho-ke ibhokisi lodoti elenzelwe ukusebenza ngokuthula noma ukubambezela i-raking kuze kube yilapho ikati lide isikhathi lingaba ngcono. Amanye amakati angahle akhethe isikhala esingeziwe, ngakho-ke kuzodingeka ubheke ibhokisi lodoti elizenzekelayo elincane ngokwengeziwe.
Uma unekati, kuzodingeka ulinde. Abakhiqizi bathi amabhokisi kadoti azenzekelayo enzelwa amakati angaphezu kwezinyanga eziyisithupha. Ngenxa yobungako bamazinyane amancane, angakhanya kakhulu okwezinzwa noma amancane kakhulu ukuthi angakhuphukela kwamanye amayunithi, noma angadla udoti. Lapho ikati lakho lifinyelela isisindo esanele, ibhokisi lodoti elihlakaniphile lizodlala indima yalo empilweni elandelayo yekati
Ukwenza iShift ibe yi-Automatic Litter Box yekati lakho
Wonke amabhokisi odoti othomathikhi adinga isikhathi soshintsho. Yonke imigqomo kadoti ezenzakalelayo idinga isikhathi soguquko. Ngokuvamile, kuhlala kuthatha isikhathi sokushintsha ukuthola ikati ukujwayela into entsha, futhi okufanayo kuyahamba ngokusebenzisa ibhokisi lodoti oluzenzakalelayo. Futhi abantu banejika lokufunda futhi, ukugcwalisa udoti ngenani elifanele, ukubheka njalo, ukuxazulula izinkinga, njll.
Ngakho-ke, lapho usebenzisa i-E Automatic Cat Litter Box yamakati, naka ngokukhethekile lesi sikhathi soguquko, ngaphandle kwalokho kuzokuphikisa.
Lapho sisetha okokuqala ngqa, sihlala sincoma ukuthi ukugcina iyunithi ingaxhunyiwe noma kwimodi 'yokuvala' kuze kube yilapho ikati liyisebenzisa njalo. Ngenkathi wenza leyo switch, kungcono ukugcina ibhokisi lodoti lendabuko eduze kuze kube yilapho ikati likhombisa ukukhetha okucacile kwebhokisi elizenzakalelayo.